အီရန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေး - ဝီကီပီးဒီးယား
အီရန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးသည် လက်ရှိတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သည့် အနေအထားမျိုးဖြစ်ပြီး အများပါဝင်သော ကြီးကျယ်သည့်အခန်းကဏ္ဍတစ်ခုလည်း ဖြစ်သည်။ ၆၀% သည် စီးပွားရေးအချုပ်အခြာအဖြစ် ပဲ့ကိုင်ဦးဆောင်သည့် အနေအထားတွင် ရှိသည်။ အီရန်အဓိကထုတ်ကုန်၏ ၈၀%သည် ရေနံနှင့်သဘာဝဓာတ်ငွေ့ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင်အစိုးရဝင်ငွေ၏ ၆၀%ဖြစ်သည်။ အီရန်စီးပွားရေးတွင် မဇ်ဟဘ်ဆိုင်ရာအ ခြေပြုဘတ်ဂျက်သည် အစိုးရ၏ဘတ်ဂျက်ဖြစ်ပြီး ၃၀% သတ်မှတ်ထားသည်။ အီရန်၏စီးပွားရေးသည် ကြီးကျယ်ပြီး ၂၀၀၉-၂၀၁၀ အတွင်း ငွေကြေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး တိုက်ရိုက်ဆုံးရှုံးနစ်နာမှု မရှိခဲ့ပေ။
နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်သည် ကမ္ဘာတွင် စီးပွားရေးအကောင်းဆုံးအဆင့် ၁၇၊ ကမ္ဘာ့အများဆုံး ရေနံထုတ်လုပ်မှုတွင် နံပါတ် ၄၊ ကမ္ဘာတွင် ပထမဆုံး သဘာဝဓာတ်ငွေ့သိုလှောင်သည့် နိုင်ငံ၊ စက်မှုလက်မှုတွင် အဆင့် ၁၀၊ ကမ္ဘာလှည့်ခရီးသည်များ စိတ်ဝင်စားသည့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်တွင် အဆင့် ၅၊ အလယ်ပိုင်းဒေသနှင့် မြောက်အာဖရိကတွင် အကြီးဆုံးနှင့် အကောင်းဆုံးစက်မှု၊ ကြေးဝါနှင့် သတ္တုထုတ်လုပ်ရာတွင် အဆင့် ၄ မှ ၁၀၊ ကမ္ဘာတွင် အလူမီနီယံ၊ မဂနီစီယံ နှင့်ကြေး သိုလှောင်ရာတွင် အကောင်းဆုံးနိုင်ငံ၊ လယ်ယာထွက်ထုတ်ကုန်များတွင် ကမ္ဘာ၌ အဆင့် ၄ ရှိသောနိုင်ငံ ဖြစ်သည်။
စီးပွားရေးနှင့် ပတ်သက်သည့် အခက်အခဲမှာ ဈေးနှုန်းများကို မထိန်းချုပ်နိုင်သည့် ပြဿနာဖြစ်သည်။ အထူးသဖြင့် စားသောက်ကုန်နှင့်ပတ်သက်ပြီး ထိုအခက်အခဲကို တွေ့ရှိရပြီး စီးပွားရေးအခက်အခဲကို ပို၍ကြီးမားစေသည်။ ထိုနည်းတူစွာ မှောင်ခိုဈေးကွက်များကို ထိန်းချုပ်ရာတွင် အခက်အခဲဖြစ်စေပြီး အီလက်ထရောနစ်ဆိုင်ရာတို့ကို အားနည်းစေသည်။ မာဟ်မူဒ်အဟ်မဒ်ဒီနေဂျာဒ် (ယခင်သမ္မတ သည် ယာရာနဲ-ကုန်ဈေးနှုန်းများ လျှော့ချရန် ရည်ရွယ်ပြီး အစိုးရက ပြည်သူအား ထောက်ပံ့သောငွေ-) အစား ယာရာနဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်ကို အကောင်အထည် ဖော်ပေးခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့သော ကြိုးပမ်းပေးမှုများ ( ဥပမာ ၂၀၀၇ ခုနှစ်တွင် အစိုးရမှ ဓာတ်ဆီ၏ ဝေစုကို သတ်မှတ်ပေးခြင်း၊ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အခွန်ကို ကုန်ဈေးနှုန်းအပေါ် ပေါင်းထည့်သတ်မှတ်ပေးခြင်း) ကြားမှ အကြမ်းဖက်ဝါဒအတိုက်အခံများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။
လွန်ခဲ့သည့်နှစ်များက ရေနံဈေးနှုန်း မြင့်တက်လာမှုသည် အီရန်အတွက် ဒေါ်လာ ၉၇ သန်းခန့် အကျိုးအမြတ်ရှိမည် ဖြစ်သည်။ ဤအမြတ်အစွန်းသည် နိုင်ငံတွင်း ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုအတွက် အထောက်အကူဖြစ်သော်လည်း ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှု၊ အလုပ်လက်မဲ့၊ ငွေကြေးတန်ဖိုးကျဆင်းမှုတို့သည် ရှိနေမြဲဖြစ်သည်။ အီရန် နိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်၏ စာရင်းအရ ၂၀၁၀ ခုနှစ်တွင် ငွေကြေးတန်ဖိုးသည် ၅-၁၁% အထိကျဆင်းခဲ့သည်။ သို့ပါ၍စီးပွားရေးသည် အသင့်အတင့်အနေအထားတွင်သာ ရှိသည်။ အီရန်၏ အချို့ပညာတတ်အုပ်စုများသည် စီးပွားရေးအခက်အခဲနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ လုံလောက်မှုမရှိသော ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတို့ကြောင့် စီးပွားရေးတိုးတက်ရန် အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်းကောင်းများ ရှာလိုသော အချို့အီရန်တို့သည် နိုင်ငံရပ်ခြားသို့ခရီးဆန့်ကြလေသည်။ လက်ရှိတွင် အီရန်သည် ကမ္ဘာ၌ သွင်းကုန်ဝယ်လိုအားတွင် အဆင့် ၁၈ ရှိပြီး နိုင်ငံတကာ ငွေကြေးသတ်မှတ်မှုစံနှုန်းအဆင့် ၂၉ တွင် ရှိသည်။
နိုင်ငံတကာဗဟိုဘဏ်က ၂၀၁၁ အီရန် မဲဟ် လတွင် အီရန်ငွေကြေးတန်ဖိုးကို ဝ% ခန့်မှန်းထားသော်လည်း အီရန်၏ စောဒကထုခြေလွှာကြောင့် ၅-၆% အထိ တိုးမြှင့်ပေးခဲ့သည်။ ထိုအနေအထားတွင်လည်း ကမ္ဘာ့အလယ်၌ ငွေကြေးတန်ဖိုးသည် အလယ်အလတ်အောက်တွင် ရှိနေသည်။ ၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံစာအရ ၂၀၁၁ တွင် အီရန်၏ငွေကြေးတန်ဖိုးသည် အလယ်ပိုင်းဒေသနှင့် မြောက်အာဖရိက၌ အမြင့်ဆုံးတွင် ရှိနေပြီး ၅-၂၂% အထိ ရှိနိုင်ကြောင်း ခန့်မှန်းထားသည်။
အီရန်သည် Pistachi- အစိမ်းရောင်ဆိမ့်သောအဆန်ပါသည့် အခွံမာအသီးတစ်မျိုး- ဇာ့အ်ဖှရန်၊  အဖိုးတန်ငါးကြီးဥ၊ Barberry- ဖှီရိုဇာကျောက်၊ ရှိဖှ်သီး(အသားများသော) အသီးများနှင့် လက်ရက်ကော်ဇောများထိုနည်းတူစွာ ကမ္ဘာတွင် ကြေးဝါအများဆုံး စုဆောင်းသိုလှောင်နိုင်သော နိုင်ငံဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူစွာ အီရန်သည် ကမ္ဘာတွင် အသီးအနှံထုတ်လုပ်ရာ၌ နံပါတ် ၈၊ သခွားသီး ထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၂၊  စစ်တပ်အင်အားတွင် နံပါတ် ၉၊ တင့်ကားပိုင်ဆိုင်မှုတွင် နံပါတ် ၁၀၊ ဘိလပ်မြေထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၄ ၊ သံထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၉ ၊ သံပုရာသီးထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၈၊ စပျစ်သီးထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၁၀၊ တရုတ်ဆီးသီးထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၂၊ ကြက်သားထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၈၊ သဘာဝဓာတ်ငွေ့ ထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၃၊ ရေနံထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၆၊ ရေနံတင်ပို့ရောင်းချရာတွင် နံပါတ် ၃၊ ကြက်သွန်နီထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၆၊ သစ်ကြားသီးထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၂၊ ဖရဲသီး စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၃၊ ခရမ်းချဉ်သီး ထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၇၊ ရှောက်ချို သံပုရာ လိမ္မော်ကဲ့သို့ အသီးများ ထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၇၊ ဘာဒံစေ့ ထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၄၊ သိုးမွှေးထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၇၊ ထုံး ထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၁၃၊ ဖဲရ်လီးသ်ထုတ်လုပ်ရာတွင် နံပါတ် ၂၊ ဘာရီးသ်ထုတ်လုပ်ရာတွင်နံပါတ် ၅ ဖြစ်သည်။
၂ ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် (GDP)
၄ အီရန်စီးပွားရေး တိုက်ခိုက်မှုများနှင့်ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုတိုက်ဖျက်ရေး
၅ ယာရာနဲ ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုဖေါ်ဆောင်ခြင်း
၆ အခြားနိုင်ငံများမှ အီရန် ရရှိမည့်အကြွေးများ
၈ အီရန်စီးပွားရေးနှင့် တည်ငြိမ်တိုးတက်မှု
အီရန်နိုင်ငံ၏ GDP နှင့် လူဦးရေတိုးတက်မှုနှုန်း (၁၉၆၇ မှ ၂၀၀၇)
၁၃၅၇ ခုနှစ် အီရန်အစ်လာမ်မစ် တော်လှန်ရေးမတိုင်မီ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှုန်းသည် လျင်မြန်လျက်ရှိသည်။ ၁၃၅၀ တွင် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုသာ အခြေခံသည့် အီရန်သည် စက်မှု သို့ ပြောင်းလဲသွားသည်မှာ စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဖြစ်သည်။ တော်လှန်ရေးမတိုင်မီ ဤကဲ့သို့ စီးပွားရေးတိုးတက်မှုရှိနေသည့်ကြားမှ ၁၃၅၇ ခုနှစ်တွင် လျော့ကျမှုများ ရှိခဲ့သည်။ အီရန်၏ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများသည် တော်လှန်ရေးမတိုင်မီနှင့် နောက်ပိုင်း ကာလများတွင် ၁၃၅၇ ခုနှစ်အထိ သုံးလေးဆယ်မီလီယံဒေါ်လာခန့် အပြင်သို့ ရောက်သွားခဲ့သည်။
များပြားလှသောရေနံ၏ ဝင်ငွေများနှင့် နိုင်ငံခြားမှ စက်ပစ္စည်းများကို ဝယ်ယူ၍ အီရန်တွင် လည်ပတ်စေရန် မိုဟမ္မဒ်ရေဇာပဲဟ်လဝီက ခွင့်ပြုပေးခဲ့သည်။ သို့သော် စက်မှုဆိုင်ရာ ဖွံ့ဖြိုးဆဲကာလ ဖြစ်နေခဲ့သည့်အတွက် ထင်သလောက် အီရန်အတွက် အကျိုးဖြစ်ထွန်းမှုမရှိခဲ့ပါ။ တစ်ဖက်မှ ကြည့်မည်ဆိုလျှင်လည်း လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင် ပျက်စီး အားနည်းမှုများ ရှိနေသည့်အီရန်အား ရေနံ၏ဝင်ငွေကိုသာ အခြေပြုရမည့်အနေအထားသို့ပြောင်းလဲစေခဲ့သည်။
အီရန်၏လူဦးရေသည် နှစ် ၂၀ အတွင်း နှစ်ဆတိုးလာခဲ့ပြီး လူငယ်ဦးရေသည်လည်း များပြားလျက်ရှိသည်။ ထိုများပြားလျက်ရှိသည့် လူဦးရေအတွင်းမှ ပြည်သူအများစုသည် လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင် ၁၃၄၀ မှစ၍ အောင်မြင်မှုရှိခဲ့သည်။ သို့သော် အီရန်သည် နိုင်ငံခြားစားသောက်ကုန်များကိုလည်း ဝယ်ယူတင်သွင်းလျက်ရှိသည်။ စီးပွားရေးအခက်အခဲများကြောင့် ပြည်သူအချို့လည်း အခြားနေရာဒေသများသို့ ပြောင်းရွေ့နေထိုင်ခြင်းများရှိသည်။
အီရန်အီရတ် စစ်ပွဲပြီးနောက် အစိုးရသည် ထုတ်ကုန်သွင်းကုန်၊ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု၊ ပညာသင်ကြားရေးနှင့် စက်မှုလက်မှု ကဏ္ဍတို့တွင် အထူးကြိုးပမ်းခဲ့သည်။ ထိုနည်းတူစွာ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် မဟာမိတ်ဆက်ဆံရေး၊ ကုန်သွယ်ရေးများ တိုးတက်ကောင်းမွန်လာစေရန် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အီရတ်စစ်ပွဲတစ်လျောက် အီရန်ပြည်သူ သုံးသိန်းခန့် သေဆုံးမှုရှိပြီး ငါးသိန်းခန့် ဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်သည် အီရန်၏စီးပွားရေးတွင် ဒေါ်လာ ၅၀၀ မီလီယံခန့် ဆုံးရှုံးနစ်နာစေခဲ့သည်။
၂၀၀၂ ခုနှစ်အတွင်း အီရန်နိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးကဏ္ဍများ
ကုန်သွယ်မှု၊ စားသောက်ဆိုင်နှင့် ဟိုတယ် (13.9%)
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့် ဆက်သွယ်ရေး (8.9%)
ရေ၊ လျှပ်စစ်နှင့် ဓာတ်ငွေ့ (2.0%)
၂၀၀၇ အိုပက်၏ အစီရင်ခံစာအရ အီရန်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန် (GDP) ၏ တိုးတက်မှုသည် ၂၀၀၆ ခုနှစ်တွင် ၉-၄ ၊ ၂၀၀၇ တွင် ၄-၅% ရှိခဲ့ပြီး ၂ နှစ်လျှင်တစ်ကြိမ် စစ်တမ်းအရ ထိုအဖွဲ့အစည်းဝင်နိုင်ငံများအကြား အလယ်အလတ်၏အောက်တွင်သာ ရှိသည်။
ကမ္ဘာ့ဗဟိုဘဏ်၏ စစ်တမ်းအရ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အီရန်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်၏ တိုးတက်မှုသည် ၈-၇% ရှိခဲ့သည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် အီရန်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်သည် ဝယ်လိုအား (Power Purchasing Parity) နှင့်အညီ ၈၄၁၇ မီလီယံဒေါ်လာ ရှိခဲ့သည်။ အီရန်၏ စီးပွားရေးကို ကမ္ဘာတွင် အဆင့် ၁၆ သတ်မှတ်ထားခံရပြီး ဩစတြေးလျပြီးနောက် နယ်သာလန်၊ ဆွီဒင်၊ ဘလ်ဂျီယန် တို့၏အပေါ်တွင် ရှိသည်။
သို့သော် အီရန်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်သည် (Rate exchange) ကုန်စည်လဲလှယ်မှုနှုန်းထားအရ ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ၃၈၂၃ မီလီယံဒေါ်လာခန့် ရှိခဲ့ပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့် ၂၉ တွင် သတ်မှတ်ခံထားရသည်။ အီရန်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်သည် အခွန်ကောက်ခံခြင်း (Per capita GDP) ဆိုင်ရာအရ ၁၂၈၀၀ ဒေါ်လာဖြင့် ကမ္ဘာ့အဆင့် ၈၇ တွင်ရှိနေသည်။
အီရန်ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်များသည် သုံးနှစ်အတွင်း အနောက်နိုင်ငံများ၏ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုကြောင့် ၂၀၁၁ မှ၂၀၁၄ အထိ ၁၆၀ မီလီယံဒေါ်လာ လျော့ကျခဲ့သည်။ အီရန်သည် ကမ္ဘာ့အလယ်တွင် စီးပွားရေး လုပ်ငန်း ကြီးမားသော်လည်း ထိုကာလတွင် ၇ ဆင့်လောက် နိမ့်ကျသွားခဲ့သည်။ သို့ပါ၍ ထိုသုံးနှစ်တာကာလတွင် ၂၈ % ခန့် စီးပွားရေးကျဆင်းခဲ့သည်။ ၂၀၁၁ တွင် အဆင့် ၂၁ ဖြင့် ကမ္ဘာ့စီးပွားကောင်းသော နိုင်ငံများစာရင်းတွင် ရှိနေသော်လည်း ၂၀၁၄ တွင် အဆင့် ၂၈ သို့ ထိုးကျသွားခဲ့သည်။ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု မပြင်းထန်မီ အီရန်ထုတ်ကုန်သည် ၅၇၆ မီလီယံဒေါ်လာရှိပြီး စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှု ပြင်းထန်လာသည့်နောက်ပိုင်းတွင် ၅၅၇ မီလီယံဒေါ်လာအထိ လျော့ကျသွားခဲ့သည်။ ၂၀၁၃-၁၄ အထိ ထိုကျဆင်းမှုသည် ဆက်တိုက် ရှိနေပြီး ထိုနှစ်ပိုင်းများတွင် ၄၉၃ မှ ၄၁၅ မီလီယံဒေါ်လာခန့်အထိ ကျဆင်းခဲ့သည်။ ထိုကဲ့သို့ စီးပွားရေးပိတ်ဆို့မှုများကြောင့် အီရန်၏ထုတ်ကုန်ကို ထိခိုက်ရုံသာမက ရေနံဈေးကွက်ကိုပါ ၂၀၁၄ ၌ အထူးကျဆင်းစေခဲ့သည်။
အီရန်သည် ၂၀၀၇ တွင်ပြည်ပပို့ကုန် ငွေတန်ဖိုးအရ ၈၃ မီလီယာဒေါ်လာရှိခဲ့သည်။
မာဟ်မူဒ်အဟ်မဒ်ဒီနေဂျာဒ် သည်စက်မှုနှင့်တွင်းထွက်လုပ်သားများအကြား ထုတ်ဖေါ်ဝင့်ကြွားခဲ့သည် မှာ---လေးနှစ်အရင်ကတည်းကအီရန်သို့စီးပွားရေးပိတ်ဆို့အဆက်အသွယ်ဖြတ်တောက်မှုစာများ ပေးပို့ ခဲ့ကြသည်။ ထိုအချိန်ကစက်မှုဆိုင်ရာပို့ကုန်ဝင်ငွေသည် ၆ မီလီယာဒေါ်လာရှိခဲ့ပြီး အခက်အခဲပေါင်းများ စွာကြားမှယခုလက်ရှိတွင် စက်မှုဆိုင်ရာပို့ကုန်၏ဝင်ငွေသည် ၁၈ မီလီယာဒေါ်လာအထိရရှိနေပြီဖြစ် သည်။ ထိုနည်းတူစွာ ၁၃၉၆ တွင်စက်မှုဆိုင်ရာပို့ကုန်သည် ၆၀ မီလီယာဒေါ်လာအထိမြင့်တက်လာမည် ဖြစ်ကြောင်းထုတ်ဖေါ်ပြောကြားသွားသည်။
ကုန်ဈေးနှုန်းမြင့်မားမှုကို တိုက်ဖျက်ထိန်းချုပ်ခြင်းသည် သိုလှောင်ပြီး အခါစောင့် ဈေးတင်အမြတ်ထုတ် ခြင်းများအတွက် အကောင်းဆုံးထိန်းချုပ်နည်းဖြစ်သည်။ အီရန်၏စီးပွားရေးသည် ၎င်းကိုလိုအပ်လျှက်ရှိ သည်။
၁၃၆၈ ခုမှ လိုအပ်သည်များကိုပြင်ဆင်ပြီးနောက် ၁၃၇၂ တွင်ပထမဆုံးအကြိမ် ၇လဆက်တိုက် ကုန်ဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်မှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့သည်။ .
၁၃၈၉ ခုနှစ်တွင်အတိုင်းထက်အလွန် ငွေကြေးဖောင်းပွမှုကြောင့် အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကကုန်ဈေးနှုန်းကွာဟမှုများရှိ နေပြီးနောက်ဆုံးစီးပွားရေးပြူနာများရှိနေမြဲဖြစ်သည်။
၁၃၉၃ တွင်ကုန်ဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်ရေးဆိုင်ရာအကြီးအ ကဲများဘက်မှလုပ်ငန်းစဉ်စတင်မည့် အကြောင်းကြေငြာချက်ရှိသော်လည်း မည်သည့်အချိန်တွင်အကောင်အ ထည်ဖေါ်မည်ကိုတော့မသိရှိရပေ။
အီရန်တွင်ယာရာနဲ ၏ရည်ရွယ်ချက်ကိုလက်တွေ့ဖေါ်ဆောင်ရာတွင် လောင်စာ၊အစားအစာ၊ ရေ၊ မီး စသည်တို့၏ ယာရာနဲ ကိုဖြည်းဖြည်းချင်း ဖျက်သိမ်းပြီး ၎င်းအစား (၁၃၉၀ တွင် ၆၀%) ငွေလက်ငင်း အနေအထားနှင့် ပြည်သူတို့အား ထောက်ပံ့ပေးခဲ့သည်။
ထိုလုပ်ငန်းစဉ်၏ကျန်ဝင်ငွေကို စည်ပင်သာယာလှပ​ေရး နှင့် ယဉ်ကျေးမှုကိစ္စရပ်များတွင် အသုံးပြုသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ်ကို ၁၃၈၀- ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ၁၃၉၀-ခုနှစ်တွင် ပြီးပြည့်စုံစွာ ဆောင်ရွက်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
အခြားနိုင်ငံများမှ အီရန် ရရှိမည့်အကြွေးများပြင်ဆင်
*ပထမအုပ်စု- စူဒန် နှင့် ဂျော်ဒန်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏အကြွေးသည်တော်လှန်ရေးမတိုင်မီကတည်းကဖြစ်သည်။
*ဒုတိယအုပ်စု- သန်ဇန်းနီးယား၊နီကာရာဂွေး နှင့်မြောက်ဘက်ဒေသနိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏အကြွေးသည်နှစ် ၂၀ အရင်ကတည်းကဖြစ်သည်။
*တတိယအုပ်စု- ထိုအုပ်စုတွင်ဥပမာအားဖြင့် တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဂျပန် နှင့်အနောက်ဘက်ဒေသနိုင်ငံများဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့၏အကြွေးသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်မှဖြစ်ပြီး အီရန်က၎င်းတို့၏အခြေအနေပေါ်မှုတည်၍တောင်းခံသွားမည်ဖြစ် သည်။ .
နိုင်ငံတကာငွေကြေးဆိုင်ရာအဖွဲ့အစည်း၏စစ်တန်းအရ ၂၀၁၅ တွင်အီရန်၏ငွေကြေးပြူနာသည်ကမ္ဘာ့နိုင် ငံများအကြားနံပါတ် ၁၃၀ တွင်ရှိနေသည်။ ထို့အတွက်ကြောင့်အီရန်သည် ယူကရိန်း ကာမရာန် နီပေါလ် နီကာ ရာဂွေး ပါရာဂွေးတို့နှင့်တတန်းတည်းတွင်ရှိနေသည်။
သတင်းအချက်အလက်နှင့်ချင့်ချိန်မှုများအရ တည်ငြိမ်တိုးတက်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး နမူနာယူရန်အညွှန်းခံရခြင်း အပေါ်ထိုအနေအထားကိုရရှိခြင်းဖြစ်သည်။၎င်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးလေ့လာချင့်ချိန်ရာတွင်ကဏ္ဍအလိုက် စည်းမျဉ်း များရေးဆွဲသည့်အပေါ်အခြေခံသည်။ ဤကဲ့သို့လေ့လာသုံးသပ်ရာတွင်တည်ငြိမ်သောအခန်းကဏ္ဍ ၈၀ အပေါ် သုံးသပ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အီရန်၏စီးပွားတိုးတက်ရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး လေ့လာရာ ၁၃၄၀ ၁၃၅၀ ၁၃၆၀ ၁၃၇၀ ၁၃၈၀ တစ် လျှောက် ၁၃၈၀ ခုနှစ်တွင်သာ ဆင်းရဲခြင်းနှင့်မညီမျှမှုများကိုတွေ့ရှိရသည်။ ၁၃၄၀ မှ ၁၃၆၀ အထိတစ်လျှောက် လုံးစီးပွားရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီးကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ သို့သော် ၁၃၇၀ တွင်အပြင်းအထန် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုကြောင့် ဆင်းရဲခြင်းနှင့်မညီမျှမှုများကိုတွေ့ရှိရသည်။ ထိုကာလတစ်လျှောက်နိုင်ငံရေးမတည် ငြိမ်မှုများနှင့်စစ်ပြီးကာလ တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနှင့် ပန်လည်တည်ဆောက်ရေးကာလလည်းဖြစ်သည့်အတွက် စီးပွားရေးကျဆင်းမှုနှင့်မညီမျှမှုများကိုသာတွေ့ရှိရသည်။
ကျန်းမာရေးနှင့်စားသောက်ကုန်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကဏ္ဍတွင် ၁၃၅၀ ၁၃၇၀ ၁၃၈၀ ခုနှစ်များ၌တည် ငြိမ်ကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရှိရပြီး အထူးသဖြင့် ၁၃၅၀ နှင့် ၁၃၈၀ တွင်ကျန်းမာရေး၌ကောင်းမွန်ကြောင်းတွေ့ရှိ ရသည်။ ထိုကဲ့သို့ကောင်းမွန်ရခြင်း၏ အဓိကအကြောင်းရင်းမှာ နို့ထွက်ပစ္စည်းနှင့်အသားငါးတို့၏အခွန်ကြောင့် ဖြစ်ပြီး ကလေးသူငယ်များသေဆုံးမှုကိုလျော့ကျစေခဲ့ကာ ကျန်းမာရေးကုန်ကျစရိတ်ကိုလည်းလျော့နည်းစေခဲ့ ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။ ထိုကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၁၃၆၀ ခုနှစ်တွင်စစ်၏ဂယက်များကြောင့်တည်ငြိမ်ကောင်းမွန်မှု မရှိဘဲစိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းများနှင့်အတူတွေ့ရှိရသည်။
လူဦးရေတိုးတက်ပြောင်းလဲလာသည့် အပေါ်မူတည်ပြီး စီးပွားရေးတိုးတက်ခြင်းကိုချင့်ချိန်လေ့လာသော် ပြီးခဲ့ သည့်နှစ်များနှင့်လွန်ခဲ့သောကလများအတွင်း လူဦးရေသည်လည်းတိုးပွါးလျှက်ရှိပြီး ၎င်းအခြေအနေအပေါ်မှု ကာအရေအတွက်သည်လည်း ၁၃၇၀ တွင်(၈၈/၄၃) ၁၃၈၀ တွင်(၃/၃၀)သည်လက်တွေ့ပြသနေသောအနေအ ထားဖြစ်သည်။
သင်ကြားရေးကဏ္ဍ၌ မည်မျှပင်ရာစုနှစ်ဝက်အတွင်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်း ရှိခဲ့သော်လည်း ၁၃၈၀ မှအပ ၅၀ % သာတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုရှိခဲ့သည်။ ထိုကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်ပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သော အနေအထားကိုဘယ် သောအခါမှမတွေ့ရသေးပါ။လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအရ သင်ရိုးညွှန်းတန်း နှင့်သင်ကြားမှုအပိုင်းတွင်အားနည်း နေသေးကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။
အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၁၃၄၀ မှအပလေ့လာတွေ့ရှိရသည်မှာ တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းမရှိသည့်အ ပြင်ကျဆင်းနေကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။၎င်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်ပြီး ပြူနာကြီးထွားစေသည့်(အထောက်အထား ခိုင်လုံသည့်ပြစ်မှုများ၊လူသတ်မှုများ) ဥပဒေ(လက်ရှိတရားရုံးဖိုင်တွဲများ) အစိုးရ၏ပံ့ပိုးမှု(အခွန်ဝင်ငွေနှင့် GDP သို့ချပေးသည့်အစိုးရ၏ဘတ်ဂျက်) စသည်တို့သည်လက်တွေ့ပြသနေသောအနေအထားများဖြစ်သည်။
နိုင်ငံရေးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၁၃၅၀ နှင့် ၁၃၈၀ ခုနှစ်ပိုင်းများနှင့်၎င်းနှစ်များမတိုင်မီကိုချင့်ချိန် လေ့လာသော် စီးပွားရေးပွင့်လင်းမြင်သာမှု အသိုင်းအဝိုင်းအဖွဲ့အစည်းများတွင်အမျိုးသမီးများပိုမိုပါဝင်ပတ်သက် လာနိုင်မှု ရွေးကောက်ပွဲများတွင်လူထုကပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာမှု ၁၃၅၀ တွင်အစ်လာမ်မစ်တော်လှန်ရေးအောင်နိုင် မှု ၁၃၇၀ ခုနှစ်အနှောင်းပိုင်းတွင်နိုင်ငံရေးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားလာမှု ၁၃၈၀ အစပိုင်းတွင် ရွေးကောက်ပွဲဆိုင်ရာဥပဒေများ အတည်ပြုရေးဆွဲနိုင်ခဲ့ခြင်းများသည် တိုးတက်ပြောင်းလဲမှုများ၏လက်တွေ့အ ကြောင်းတရားများဖြစ်သည်။ ဤအခြေအနေတို့သည်နိုင်ငံရေးတိုးတက်ပြောင်းလဲမှုကျဆင်းနေချိန် ၁၃၆၀ ခုနှစ် စစ်ပွဲ၏ဂယက်များရိုက်ခတ်နေချိန် ၁၃၅၇ တော်လှန်ရေးပြီးချိန်နိုင်ငံရေးအပြောင်းအလဲနှင့်မတည်ငြိမ်မှုများရှိနေ သည့်အချိန်တွင်ဖြစ်သည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းမှုဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်၍ လွန်ခဲ့သည့်ရာစုနှစ်ဝက်တစ်လျှောက်တိုးတက်ကောင်း မွန်ခြင်းကိုမတွေ့ရသည့်အပြင်ကျဆင်းလာမှုကိုသာတွေ့ရှိရသည်။၎င်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်ပြီးအီရန်တွင်အမြဲဆို သလိုကျဆင်းနေမှုကသက်သေဖြစ်သည်။ စနစ်တကျထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်နေသည့်ကြားမှနောင်အနာဂတ်၌ လည်းကျဆင်းဖွယ်ရာရှိနေသည်။
သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်အဓိကဆက်နွယ်နေသည့် ရေ တွင်လည်းရာစုနှစ်ဝက်အတွင်းကျဆင်းမှုကိုသာတွေ့ ရသည်၊ ၁၃၄၀ နှင့် ၁၃၅၀ တွင်အနည်းငယ်ကောင်းမွန်ပြီး ၁၃၇၀ နှင့် ၈၀ ၌အတော်လျော့ကျလာသည်ကိုတွေ့ ရှိရသည်။ ၁၃၈၀ နမူနာယူချင့်ချိန်ဆောင်ရွက်မှုများအရ ကဏ္ဍအသီးသီးကျဆင်းမှုများတွင် ရေသည်အလွန်အ ရေးပါသောအခန်းကဏ္ဍဖြစ်ခဲ့ပြီး ကဏ္ဍအလိုက်ကျဆင်းမှုများတွင်လည်းလွန်စွာအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနေသည်၊ (ထိုကဲသို့သောအခြေအနေမှာပင် ၆ နှစ်တာနေထိုင်ခဲ့ဖူးသော်လည်းတစ်ရက်မှရေပြတ်တောက်မှုနှင့်မကြုံခဲ့ရပါ-ဤဆောင်းပါးကိုဘာသာပြန်သူ) မည်မျှပင်ထိုကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်ပြီးကျဆင်းသည်ဟုဆိုစေကာမူအကြောင်းရင်း မှာမိုးခေါင်ရေရှားမှုကြောင့်သာဖြစ်သည်။ သို့သော်လေ့လာသုံးသပ်ချက်များအရ ရေ ပေးဝေရေးဆိုင်ရာအကြီး အကဲများနှင့် ရေအရင်းအမြစ်တို့ကိုသာပြန်လည်ချင့်ချိန်လေ့လာရမည်ဖြစ်ပြီး ရခွန် မြေအောက်ရေသိုလှောင် ခြင်းဆိုင်ရာကျဆင်းမှု ရေသုံးစွဲမှုလွန်ကဲခြင်း တို့အပေါ်တွင်လည်းမူတည်သည်။
လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတည်ငြိမ်မှုနှင့်ပတ်သက်ပြီး ရေကဲ့သို့ပင်လျော့ကျမှုကိုတွေ့ရသည် ၁၃၈၀ တွင်လည်းအ နိမ့်ဆုံးအထိလျော့ကျလာကြောင်းတွေ့ရသည်။ ကျွနု်ပ်တို့သိထားပြီးဖြစ်သည်ရေသည်အလွန်အရေးပါသောအ ရင်းအမြစ်ဖြစ်သည် အထူးသဖြင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးတွင်အရေးပါသည့်အလျှောက် အီရန်တွင်ရေအရင်းအ မြစ်မှအတိုင်းအတာတစ်ခုကို လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးအတွက်သီးသန့်ခွဲဝေပေးထားသည်။ ရေနှင့်လယ်ယာစိုက်ပျိုး ရေးတိုးတက်ကောင်းမွန်မှုသည်ဆက်စပ်နေသည့်အလျှောက်ဂရုပြုရမည့်အချက်ဖြစ်သည်။ ထိုနည်းတူစွာဓာတ် မြေဩဇာသုံးစွဲမှုလွန်ကဲခြင်း ရာသီဥတုပူပြင်းခြောက်သွေ့ခြင်း စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလွန်ကဲခြင်း စသည်တို့သည်လယ် ယာစိုက်ပျိုးရေးကိုမငြိမ်မသက်ဖြစ်စေသည့် အကြောင်းတရားများဖြစ်သည်။
မြို့ပြနှင့်ကျေါ်ရွာတည်ဆောက်ခြင်းများတွင် တိုးတက်မှုရှိပြီး အသစ်စတင်တည်ဆောက်ခြင်းများလည်းရှိနေ သည်။ ထိုအခန်းကဏ္ဍတွင်အရှိန်အဟုန်ကောင်းလျှက်ရှိပြီး ၁၃၇၀ နှင့် ၁၃၈၀ တွင်အကောင်းဆုံးအနေအထား တွင်ရှိခဲ့သည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကဏ္ဍမှာတော့ ကျဆင်းမှုများရှိခဲ့သည်၊ ၁၃၄၀ ၅၀ ၆၀ တွင်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိ တိုးတက်ကောင်းမွန်ခဲ့သော်လည်း ၁၃၇၀ နှင့် ၁၃၈၀ တွင်လျော့ကျမှုများရှိခဲ့သည်။ ဖါ်ပြပါနှစ်များအတွင်းရင်း နှီးမြုပ်နှံမှုအားနည်းခြင်းကြောင့် ကုန်းကြောင်းလေကြောင်းဆိုင်ရာအစီးအနင်းများအသစ်မထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ အ စီးအနင်းများ၏အရည်အသွေးနိမ့်ခြင်းကြောင့် သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၌လုံခြုံမှုနည်းပါးခြင်း ၊လေယာဉ်လမ်းကြောင်း ပျံသန်းမှုများတွင် မတော်တဆမှုများစသည့်အကြောင်းရင်းများကြောင့်လည်း၎င်းကဏ္ဍတွင် တိုးတက်မှုနှုန်းကျ ဆင်းခဲ့သည်။
စွမ်းအင်ပိုင်ဆိုင်ရာနှင့်ပတ်သက်၍ ၁၃၅၀ နှင့် ၁၃၈၀ တွင်တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုကို တွေ့ရှိရသည်၊ ၁၃၅၀တွင် ကောင်းမွန်ရခြင်း၏အကြောင်းရင်းမှာ စွမ်းအင်မှရရှိသည့်အမြတ်အစွန်း ၊ ရေနံထွက်နှုန်းကောင်းခြင်းနှင့်စွမ်းအင် ဆိုင်ရာအခွန်လျော့ကျခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၁၃၈၀ တွင်စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအခွန်မြင့်တက်လာသော်လည်းကျ ဆင်းမှုမရှိခဲ့ခြင်းမှာ လျှပ်စစ်စွမ်းအင်ပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင်ခြင်း၊ ရေနံထွက်နှုန်းကောင်းခြင်းနှင့် အမြတ်အစွန်းတို့ ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ခြုံငုံ၍ကြည့်မည်ဆိုလျှင်အီရန်တွင် တိုးတက်မြင့်မားရာ၌ စွမ်းအင်လောင်စာပိုမိုထုတ်လုပ်နိုင် ခြင်း၊ ၎င်းမှအမြတ်အစွန်းများရရှိခြင်း ၊ စွမ်းအင်ဆိုင်ရာအခွန်များလျော့ကျခြင်းတို့သည် ဆက်နွယ်လျှက်ရှိသည်။
စီးပွားရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ကဏ္ဍအလိုက်တိုးတက်ကောင်းမွန်မှုသည် ၁၃၅၀ တွင် ၈၁% ရှိပြီး ထိုနှစ်အရင်ကာ လများအတွင်းကောင်းမွန်မှုမရှိကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ ၁၃၈၀ တွင်တိုးတက်ကောင်းမွန်ရခြင်း၏အဓိကအ ကြောင်းရင်းမှာ လုပ်အားစိုက်ထုတ်မှု၊ပြည်တွင်းထုတ်ကုန်အခွန်၊ထုတ်ကုန်များအတွက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံနိုင်ခြင်း၊ကုန် ထုတ်လုပ်ငန်းအတွက်အစိုးရမှပေးရမည့်အကြွေးနည်းပါးခြင်း တို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။ ၁၃၄၀-၆၀-၇၀-၈၀ ခုနှစ်များ တွင်ကဏ္ဍအသီးသီး၏သော့ချက်ဟုဆိုရမည့်(ငွေကြေးတန်ဖိုးလျော့ကျခြင်း ၊စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုလွန်ကဲခြင်း၊လေ့လာ ရေးနှင့်ကျယ်ပြန့်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ရေး ကိစ္စရပ်တို့၏ကုန်ကျစရိတ်)တို့ကြောင့်ထင်သလောက်ကောင်းမွန်တိုး တက်ခြင်းမရှိခဲ့ပေ။
ပြည်ပကုန်သွယ်ရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီး ၅ နှစ်တာကာလအတွင်းတွေ့ရှိရသည်မှာ ၁၃၅၀ နှင့် ၇၀ တွင်တိုးတက်မှု ရှိပြီး ကျန်သုံးနှစ်တွင်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခဲ့ခြင်းမရှိပါ။ ၁၃၇၀ ၌ပြည်ပပို့ကုန်နှင့်ပတ်သက်၍အရေအတွက်နှင့် အ ရည်အသွေးမြင့်မားခြင်း၊ ရေနံမှအပအခြားပို့ကုန်သွင်းကုန်တို့ကိုကောင်းစွာချိန်ထိုးနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဖြစ်သည်။
ကုန်ထုတ်လုပ်မှုနမူနာ၊သုံးစွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး မော်ဒလ်အသစ်များကိုထုတ်လုပ်ရန်အကြံပေးလေ့လာမှုများ လုပ်ဆောင်လျှက်ရှိသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၅ နှစ်အတွင်း ၁၃၄၀-၅၀ ၌တိူးတက်ကောင်းမွန်မှုရှိပြီးကျန်သုံးနှစ်တွင် ထင်သလောက်တိုးတက်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ကျောက်မီးသွေးနှင့်လောင်စာအခွန်အခများမြင့်တက်လာခြင်း၊ရေ၊လျှပ်စစ် နှင့်စွမ်းအင်သုံးစွဲမှုမြင့်မားခြင်းတို့သည်တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းကိုကျဆင်းစေသည့်အကြောင်းရင်းများဖြစ်သည်၊
အီရန်စီးပွားရေးမြင့်မားစွာရပ်တည်နိုင်ရေးအတွက် ကဏ္ဍ ၁၅ ကိုလေ့လာသုံးသပ်ကောက်ချက်ချခဲ့သည်။ လေ့ လာသုံးသပ်ချက်များ၏ရလဒ်တွင်တွေ့ရှိရသည်မှာကဏ္ဍအသီးသီးတွင် ၁၃၆၀-၇၀ ၌တိုးတက်ကောင်းမွန်ခြင်းမ ရှိ၊ ကျန်သုံးနှစ်တွင်နည်းပါးသော်လည်းတိုးတက်ကောင်းမွန်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရသည်။ လွန်ခဲ့သည့် ၅ နှစ်တာကာ လအတွင်းအီရန်၏စီးပွားရေးတိုးတက်နှုန်းအမြင့်ဆုံးသည် ၁၃၅၀ တွင် ၆၇% ဖြင့်တွေ့ရှိရသည်။ ထိုနည်းတူစွာ လေ့လာစမ်းစစ်မှုများအရ နှုန်းထားကျဆင်းမှုများရှိနေချိန် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့်ပတ်သက်၍မြင့်တက်လာ သည့်ရာခိုင်နှုန်းမှာ ၁၃၇၀ တွင် ၄၁% ၊ ၁၃၈၀ တွင် ၅၈% ရှိခဲ့သည်။ ဤလေ့လာသုံးသပ်ချက်များကဖေါ်ပြနေ သည်မှာ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိပြုံးတီးနေမှုကို တားဆိးနိုင်ခြင်းအားဖြင့်လူ့အသိုင်းအ ဝိုင်းနှင့် စီးပွားရေးကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်။
Wikimedia Commons တွင် Category:Economy of Iran နှင့် ပတ်သက်သော မီဒီယာ ရှိသည်။
↑ Iran privatizes $63bn of state assets
↑ PressTV: Iran privatizes $۶۳bn of state assets. Retrieved January 28, 2010.
↑ Economist, Jan 18, 2003
↑ IRNA: Crude price pegged at dlrs 39.6abarrel under next year's budget. Retrieved December 5, 2008.
↑ PressTV: Iran oil exports top 844mn barrels Retrieved June 16, 2010
↑ Foreign and CommonWealth Office: Iran's entry. Retrieved June 21, 2009.
↑ The Rise of the Pasdaran: RAND corporation Retrieved June 10, 2010
↑ Abrahamian, History of Modern Iran, (2008), p.178
↑ Ajazeera.net: The tragicomedy of Iran sanctions Retrieved May 22, 2010
↑ The World’s Worst Economies - Daniel Fisher - Full Disclosure - Forbes
↑ مزایا و ویژگی‌های اقتصاد ایران وزارت امور خارجه
↑ Iran's entry
↑ "Iran: Country Brief". Development Progress. World Bank. June 2009. http://go.worldbank.org/KQD2RP3RX0. Retrieved 2009-07-12.
↑ Iran Daily: New Plan Focus On Subsidies Retrieved July 23, 2010.
↑ Atieh Bahar: Planned Economic Reforms Retrieved May 24, 2009
↑ PressTV: Iran VAT suspension stirs controversy Retrieved May 24, 2009
↑ Iran Daily: Gov’t Set to Change Economic Course Retrieved June 5, 2009.
↑ "Iran Inflation Rate". index Mondi. http://www.indexmundi.com/iran/inflation_rate_(consumer_prices).html.
↑ Iran's inflation reaches four year low. Retrieved February 27, 2010.
↑ Frances Harrison (January 8, 2007). "Huge cost of Iranian brain drain". BBC News. http://news.bbc.co.uk/2/hi/middle_east/6240287.stm.
↑ Gheissari, Ali (April 2, 2009). Contemporary Iran: Economy, Society, Politics. USA: Oxford University Press. pp. 3–4 (Paperback edition). ISBN 0-19-537849-0.
↑ List of countries by GDP (PPP) - Wikipedia
↑ List of countries by GDP (nominal) - Wikipedia
↑ faostat.fao.org فائو
↑ IranCon Min - www.iranconmin.de
↑ Migration information source: Iran. Retrieved July 18, 2009.
↑ اوضاع اقتصادی ایران در دوران پهلوی دوم
↑ Iranian Economy in Six Snapshots
↑ "Iran-Iraq war". Microsoft Encarta. 2008.
↑ Globalsecurity.org: Iran-Iraq war (1980–1988). Retrieved October 21, 2009.
↑ GDP - official exchange rate 2009 country rankings - Flags, Maps, Economy, Geography, Climate, Natural Resources, Current Issues, International Agreements, Population, Social...
↑ GDP - per capita (PPP) 2009 country ranks
↑ نزول ۷ پله‌ای جهانی اقتصاد ایران خبرگزاری انتخاب
↑ تازه‌ترین گزارش سازمان تجارت جهانی: اوج‌گیری چین و افول ایران - © ۲۰۰۹تمام حقوق این وب‌سایت بر اساس قانون کپی‌رایت برای رادیو فردا محفوظ است
↑ رئیس جمهور: سال ۹۲ صادرات صنعتی به مرز ۶۰ میلیارد دلار خواهد رسید
↑ اقتصاد ایران آنلاین - ارز پس از3سال تک نرخی می‌شود؟
↑ نمودار مقایسه قیمت دلار در بازار آزاد: ... - ارانیکو
↑ روزنامه اطلاعات بین‌المللی چاپ لندن شماره ۴۶۴۲ / ۱ جولای ۲۰۱۴ /۱۰ تیر ۱۳۹۳ صفحهٔ ۳.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အီရန်နိုင်ငံ၏_စီးပွားရေး&oldid=445085" မှ ရယူရန်
၆ ဇန်နဝါရီ ၂၀၁၉၊ ၀၈:၅၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။